Tacsi Tiiraanyo leh: Duqii magaalada Hadaaftimo oo geeriyooday
Home»Somali News»Tacsi Tiiraanyo leh: Duqii magaalada Hadaaftimo oo geeriyooday
Facebook	Twitter	Tuesday, January 18 2011	Tacsi Tiiraanyo leh: Duqii magaalada Hadaaftimo oo geeriyooday	Written by Sugulle Warsame Sugulle
Add comment	Hadaaftimo (SPR): Waxaa magalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag ku geeryooday ilahay janno iyo raxmoba ha ka waraabiyo Marxuum Maxamuud Cabdi Saalax Ahmed Garaad ayaa habeenimadii bishu markey ahayd January 17th, 2011 ku geeriyoodey isla markaana aas qaran loogu sameeyey isla degmada Hadaaftimo.
Marxuumka ayaa maanta waxaa aaskiisa ka qayb galay dadwayne aad u farabadan oo ka kala yimid magalada Hadaaftimo iyo nawaaxigeedaba. Waxaa aaska marxuumka ka qayb galay dad farabadan oo uu ka dhe xmuuqday Sultaanka Warsengeli, Sultaan Siciid Suldaan Abdi-Salan Garad Maxamuud, Culimaa u’diin, odayaal, iyo dhalinyarabo.
Marxuumka ahaan jiray dadkii berigii hore ka shaqayn jiray magalada Cadan, laakin intii danbe cimrigisa ku qaatay magalada Hadaaftimo isagoo ahaa duqa magaalada taniyo sanadkii 1990. Marxuumka ayaa lagu yiqin wanaag fara badan, dhexdhexaadnimo, daacadnimo iyo ilaah ka cabsiba, Geeridiisuna ku noqotey dadka mid laga naxo.
Waxaan ilaahay marxuumka iyo intii ka horaysayba uga baryeynaa inuu u furo albaabada janadisa Firdowza, ehelkii iyo qarabadii iyo asxaabtii uu aduunka kaga tegay samir iyo iiman ka siiyo.	Social sharing
« Maamulkii hore ee degmada Eyl iyo Golle deegaan cusub oo la sameeyey	DHAGAYSI------ Madaxweyne Faroole oo safar uu kaga qayb Gelayo shirka jabuuti maanta uga baxay Garoowe »